Shir u Socday Xisbiyada Mucaaradka Somaliland Oo Soo Gabagaboobay – Goobjoog News
Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland waxaa lagu soo gabagabeeyay Shir muddo Seddax maalin halkaasi ay ku lahaayeen Labada Xisbi Mucaarad Somaliland ee UCID iyo Wadani, kaasi oo arimo badan looga hadlayay.
Inkastoo aan qodobada shirkaasi kasoo baxay saxaafadda loo soo wada bandhigin ayaa hadana waxyaabaha ay ka wada shireen waxaa ka mid ah arimaha ammaanka, siyaasadda iyo maalgashiga dalka.
Arinta ugu weyn ee ay ka wada hadleen ayaa ahayd aayaha xukuumadda Siilaanyo ee haatan waqtigeedu dhamaanayo, inkastoo muddo loogu daray.
Xisbiyadaan ayaa sheegay in wax walba oo dhibaato ku ah dalka iyo shacabka marnaba aysan qaadan doonin oo meel ay uga soo wada jeedsanayaan.
Sidoo kale hogaanka maamulka Somaliland ayeey ku dhaliileen in ay la yimaadeen caburin iyo ku takri falka hantida shacabka.
Xukuumadda Siilaanyo ayaa diidaneyd qabsoomidda shirkaan, waxaana ay u arkeen in uu yahay mid lagu doonayo in lagu soo abaabulo dhaqdhaqaaqyo iyaga ka dhan ah, waxaana halka lagu qaban lahaa shirka u direen ciidan joojiya, inkastoo maxkamadda sare ay u ogolaatay ugu dambeyn inay shiraan xisbiyadaan.
Ra'iisul Wasaare Cumar Oo Cambaareeyay Weerarkii Shalay Ee Hotel Jazeera